Chii chinonzi feral cats? | Cherechedzai Makati
Ndichifamba munzira dzomuguta ripi neripi, kana ripi zvaro guta; kune twunhu tudiki twunotyisa twakahwanda pasi pemota, kana kumativi emidziyo yemarara. Sezvingabvira, kune vanhu vanovavenga, zvokusvika pakuda kugumisa upenyu hwavo nokukurumidza apo mukana unomuka.
Ivo, katsi, ndivo vakakanganwa zvikuru. Vakaberekwa uye vakakura vakasiyana nenzanga yevanhu, asi munyika imwe chete nesu. Neraki ripi zvaro, pachave nemumwe munhu anovadyisa, asi izvo hazvishandure mamiriro avo ekusagadzikana zvakanyanya. Kutaura zvazviri, vanofanira kuramba vachizvidzivirira kune vaya vanoda kuvakuvadza.
1 hupenyu hwekatsi
1.1 Mapoka evanhu
2 Kurwa kwekatsi kunoitwa sei?
2.1 Zvine migumisiro yei?
Mvura nechando vavengi vayo vaviri. Zvimwe zviviri. Vanogona kuperetera magumo evanorwara, pamwe chete nepwere dzisati dzadzora tembiricha yemuviri wavo zvakanaka. Vanaamai vavo vachaita zvisingaite kuti vachengetedze kubva kune tembiricha yakaderera, asi kune katsi inogara pakati pevanhu muguta idambudziko remazuva ese.
Kufanana nesu, imhuka dzine ropa rinodziya. Asi tembiricha yavo yemuviri yakati kwiriri kupfuura yevanhu: kutenderera 38 degrees Celsius. Dambudziko nderekuti havangadzori kusvikira mwedzi miviri kana mitatu yaberekwa, uye kunyange zvakadaro, kana kune chando zvinowanzoitika kuti havazopfuuri mberi gore rokutanga risati rasvika.
Vanonzi vakazvimiririra zvakanyanya, asi nzira yavo yekupona pamiganhu yenyika yevanhu ndeyekugara mumapoka. Hadzi dzinochengeta pwere dzisinganyanyi kubva padziri, ukuwo hono dzichibuda kuti dzifambe munzvimbo yadzinofunga kuti inharaunda yadzo. Hongu, vose vanova vanoshingaira kunyanya usiku, apo kunenge kusina ruzha mumigwagwa uye pazvinenge zvava nani kuti vaende kunotsvaka zvokudya mumagaba emarara kana… chero kwavanochiwana.
Kana paine katsi nyowani muboka vanoteedzera protocol yakasimba: kutanga, kubva kune imwe chinhambwe ivo vanocherechedzwa uye vanonhuhwa; zvino, kana zvinhu zvikafamba zvakanaka, katsi itsva achakwanisa kuzorora pedyo navo, asi vachiri kuchengeta kure kwavo. Nokufamba kwenguva, uye sezvavanowana chivimbo, vachamugamuchira mumhuri, vachimurega achitamba nevaduku, kana kurara navo.
Chokwadi ndizvo chete kana zvese zvikafamba zvakanaka. Pane dzimwe nguva, kunyanya kana katsi itsva yakura uye/kana kuti iri mwaka wekusvirana, inorambwa nemhere nekufembedza.. Vachaedza kunzvenga hondo, asi kana vapi navapi vanobatanidzwa vakanzwa vachityisidzirwa, havazenguriri kurwisa. Asi hondo idzodzo dzakaita sei?
Kurwa kwekatsi kunoitwa sei?
Ndakaona akati wandei muhupenyu hwangu, uye ndinogona kusimbisa kuti anowanzo mapfupi. Inopa pfungwa yekuti vanoziva muviri wavo, uye kuti vanogona kukuvadza zvakanyanya. Humbowo hweizvi zviratidzo zvemuviri zvavanoburitsa: kutarisa, ruzha uye zvakakomba meow, bristly bvudzi. Zvose chikamu chechirongwa chekuedza kudzivisa kunetsana. Chokwadi kana vasvika pamakumbo kureva kuti kana vasvika pakushandisa nzwara vanopana imwe, pamwe mbama mbiri, ‘mune simba’ obva atiza ane ‘simba’, wekupedzisira anomudzingirira. ... kana kwete; kana akamutevera, vachadzokera kuchinhu chimwe chete, kunze kwekunge asina simba akwanisa kutiza kubva kune 'akasimba', kana kuti 'ane simba' akwanisa kumudzinga kubva munharaunda yake.
Nepo kuguma kwemamiriro ezvinhu aya kuchisarudzwa, isu vanhu tichange tichiedza kurara, kana kuenderera mberi nemaitiro edu. Zvingangodaro, vazhinji havadi uye vanotogumbura ruzha rwunoitwa nekatsi. Uye zvine musoro: hapana anoda kuvhiringwa muhope dzavo kana basa ravari kuita panguva iyoyo.
Zvine migumisiro yei?
Kune vanosarudza kunyunyuta, uye mushure mezvichemo zvenyu pachauya kombi ichatyairwa nevanhu ichabata mhuka idzi dzoenda nadzo kunzvimbo dzakazara matanga. Makeji avanozogovana nekatsi gumi nemaviri, kana zvisingaite.
Kutya uye kusachengeteka zvinotora zvimwe zvisikwa zvisinganzwisisi chikonzero nei zvakanyimwa rusununguko rwazvoUye zvishoma pavanenge vachingoita zvavanenge vachiita kwemireniyumu: dzivirira zvavanofunga kuti ndezvavo, uye kana vasina kuchekwa, edza kutsvaga mudiwa. Zvakaipa sei izvi?
Chokwadi ndechekuti zvinoita sezvisina basa. Feral katsi, pane dzimwe nguva, kuendeswa kumatanga uye kunonzi kunogara mhuka uko, mune zvakanakisisa zvezviitiko, ivo vachagamuchirwa uye vanoendeswa kumisha iyo, kwavari, inenge ichingova chimwe chinhu kunze kwekeji itsva.
Hadzi inokwanisa kufamba makiromita anoverengeka pazuva yakavharirwa mukati memadziro mana ihadzi ine zvinetso zvakakomba, kwete zvomuviri, asi zvepfungwa.. Anoswera akahwanda pasi pemubhedha kana mukona, achizevezera vanhu vanoda kumuchengeta, uye anogona kutovarwisa. Mweya wake, moyo, kana chipi zvacho chaunoda kudana nacho, chakaputsika.
Feral katsi hadzisi mhuka dzinogona kugara mumba, nekuti vanoda rusununguko.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Curiosities » Chii chinonzi feral cats?
Aurelio Janiero Vazquez akadaro
Saka, zvokuita? Kuvasiya mumigwagwa hakuratidziwo hunhu. Zvirwere, mota, vanhu vasina hunhu… Woita sei?
Pindura kuna Aurelio Janeiro Vazquez
Katsi katsi inoda kunge iri panze, semuenzaniso yadhi yakakomberedzwa ingava nzvimbo yakanaka kwairi.
Dambudziko rakafanana nekugara nguva dzose: dzimba dzeguta, pasina kutaura kana kuita chero chinhu, regai vanozvipira vatarisire zvose ... uye zvechokwadi, izvo zvinoreva izvo zvatinoziva kare, kuti chikafu, vet, nezvimwewo, zvose. mari iyoyo, fungidzira vanhu ava vari voga.
Kudai zvinhu zvakanga zvakasiyana, matumba aizoiswa pachena, ane tudzimba twavo uye mamwe kuti azvidzivirire pakutonhorwa nokupisa.
Asi kuSpain kuchine nzira refu yekufamba.
Chivako changu chine gadheni rega rega uye boka rekitsi rakaonekwa mariri, ruzhinji rwevavakidzani rwakafara nekuti pakati pezvimwe zvinhu vaichengeta makonzo. Vavakidzani vane katsi vakavavigira zvokudya uye mumwe munhu akavaisira chokunwa mvura. Pamusoro pezvo, varimi vakasiyawo gaba ravanoshandisa vakazvambarara kuti vave nepekugara uyewo nechepazasi pechivako ichi pane dzimwe nzvimbo dzavakaenda kana kwanaya. Pashure pemakore anoverengeka, vamwe vavakidzani vakatanga kunyunyuta pamusoro katsi uye "zvinoshamisa" vakatanga kunyangarika. Chakanyanya kurwadza ndechekuti mugoti wepano une mbiri yekuti ukasavati papera svondo vanenge vauraiwa. Uye hapana zvino avo vakachema-chema nezvekatsi vachichema-chema kuti kune makonzo zvakare... Sezvineiwo ndaona mamwe acho mune mamwe magadheni ezvivakwa zvakavakidzana uye mushure memakore akawanda mapoka akati wandei akaumbwa mumagadheni akasiyana asi edu haasisina. tsikwa pairi tsitsi chokwadi
Kana zvinonyadzisa. Chinhu chakaipisisa ndechokuti, kunyange zvazvo kune dzimwe nzvimbo dzekuchengetedza mhuka uye dziviriro dzakawanda, kuchine mamwe mabheji akawanda umo mhuka dzemazera ose, marudzi, hukuru uye mamiriro ehutano anosimbiswa.
Ngativimbei kuti mamiriro ezvinhu achachinja nokukurumidza.
Ndedzipi pfungwa dzekatsi?